Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah – SomaliQld
Ilaalinta arimahaaga gaarka ah waa waajib nasaaran.
waxaan ku adagnahay sida aan u maareyno macluumaadka shakhsiyeed.
Nidaamkan asturnaanta wuxuu qeexayaa sida aan u ururino, u kaydinno, u isticmaalno una siideyno macluumaadka shakhsiyeed.
Waa maxay macluumaad kaaga shaqsiyeed?
Nidaamkan asturnaanta, ereyga ‘macluumaadka shakhsiyeed’ wuxuu leeyahay macnaha lagu siiyay Sharciga Asturnaanta.
Macluumaadka shaqsiyeed waa macluumaadka aan ururinno een ku aqoonsan karno, ama loo isticmaali karo in lagu aqoonsado.
Maxaan u ururinaa macluumaadka shakhsiyeed?
Waxaan u baahanahay inaan ka soo aruurino qaar ka mid ah faahfaahinta shaqsiyeed si aan kuu siino adeegyadayada ama aad ka soo qayb gasho xalfadaha iyo cayaaraha kubad cagta ee aan diyaarino.
Waxaan sidoo kale u aruurineynaa macluumaadkan shakhsi ahaaneed ujeedooyinka ka jawaab celinta weydiintaada, faallooyinkaaga ama jawaab celintaada.
Haddii aad dooratay inaadan bixin macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, waxaa suuragal ah inaanan ku siin karin jawaab aad inaga doonaysid.
Macluumaad noocee ah ayaan ururinaa?Macluumaadka aan kaa aruurinno adiga waxay kuxirantahay inaad tahay mutadawiciin, ciyaar yahan kubada cagta ah, qof ubaahan caawimadeena sida buuxinta foomamka dalabka, tarjumida, ama xubin katirsan bulshada. Waxaa ka mid noqon kara:
Magacaaga, iyo faahfaahinta xiriirkaaga.
Websaydhada aad booqato iyo raadinta khadka tooska ah ee aad sameyso.
Nambarada taleefanada ee aad ka hesho wicitaanada iyo farriimaha si ay kuugu cusboonaysiiyaan.
Sideen u ururinaa macluumaadka shakhsiyeed?
SomaliQld waxay ururin kartaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed markaad nalala soo xiriirto , faallo ama jawaab celin xagga emaylka ah, markii aad is-qorto iyo / ama aad ka qaybgasho xalfadaga , ama marka aad aad soo booqato boggeena warbaahinta bulshada.
Waxaan ururinaa macluumaadkaaga shakhsiyeed haddii aad sameyso mid ka mid ah kuwa hoose:
Macluumaad nagu siiso foomamka dalabka ama foomamka baaritaanka adeegga.
Macluumaad na siiso markaad booqato degelkeenna.
Kusoo qor wargeysyada, digniinta ama adeegyada kale ee naga socda.
Ka qeyb qaado tartan, abaalmarino abaalmarin ama sahan.
Booqo degelkeenna, bogga Facebook iyo bogag kale oo aan leenahay oo aan maamulno.
Qayb ka noqo dhacdooyinkeena iyo tartamada kubada cagta
Sideen u isticmaalnaa macluumaadkaaga shaqsiyeed?
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed inaan kula soo xiriirno mustaqbalka oo aan kula socodsiino dhammaan macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan waxqabadyadeena sida xalfadaha soo socda iyo tartamada kubbadda cagta iwm
Macluumaadka shaqsiyeed ee AAN aruurin?
Ma ururinayno macluumaadka soo socda
Faahfaahinta maaliyadeed ama wixii macluumaad xasaasi ah ee adiga kugu saabsan.
Soo bandhigida macluumaadkaaga shaqsiyeed
Waxaan sidoo kale u adeegsanaa bixiyeyaasha kooxda saddexaad adeegyo sida ka shaqeynta lacag bixinta, martigelinta websaydhka, suuqgeynta ku saleysan webka, keydinta xogta, keydinta iyo falanqaynta
Dhinacyadan waxaa laga yaabaa inay qabsadaan oo ku keydiyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed meel ka baxsan Australia. Dhinacyadan waxaa ka mid ah (laakiin aan ku xaddidnayn), Facebook, Google, MailChimp iyo SurveyMonkey, lagamana yaabo inay hoos yimaadaan Xeerka Asturnaanta ee 1988 (Cth.), Laakiin waxay yeelan doonaan siyaasado u gaar ah oo asturnaan ah.
Xuquuqda helitaanka macluumaadka
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaadka shaqsiyeed ee aan hayno waxaadna na weydiisan kartaa inaan cusbooneysiino ama saxno macluumaadkaaga shaqsiyeed.
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah ama cabashooyin asturnaan la xiriir nala soo xiriir publicrelations@somaliqld.com
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee SomaliQld
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo 29 Juun 2021
Dib-u-eegid soo socota: 29 juun 2022
Ururka bulshada Somali ee Queensland INC
Cinwaanka: 44 skylark street Inala 4077